Levitikosy 7:1-27 "1 Ary izao no lalàna ny amin’ny fanati-panonerana: masina dia masina izany. 2 Eo amin’izay famonoana ny fanatitra odorana no hamonoana ny fanati-panonerana; ary ny rà dia hatopiny manodidina amin’ny lafin’ny alitara. 3 Ary dia hateriny avokoa ny hofany sy ny saborany rehetra, dia ny safodrorohany sy ny saboran-tsinainy 4 ary ny voany roa mbamin’ny fonom-boany, izay eo amin’ny takibany, ary ny ila-atiny lehibe; hatao indray manala amin’ny voany no fanaisony izany. 5 Ary hodoran’ny mpisorona ho fofona eo ambonin’ny alitara ireo ho fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah; dia fanati-panonerana izany. 6 Ny lehilahy rehetra amin’ny mpisorona no mahazo mihinana izany; eo amin’izay fitoerana masina no hihinanany azy: masina dia masina izany. 7 Ho tahaka ny fanatitra noho ny ota ny fanati-panonerana, ka lalàna iray no ho amin’izy roa: ho an’ny mpisorona izay manao fanavotana aminy izany. 8 Ary ilay mpisorona manatitra ny fanatitra odorana izay aterin’ny olona dia hahazo ny hoditr’izany fanatitra odorana nateriny izany. 9 Ary ny fanatitra hohanina rehetra izay voaendy amin’ny fanendasa-mofo sy izay rehetra atao amin’ny vilany fandrahoana, na amin’ny lapoely, dia ho an’ilay mpisorona manatitra azy. 10 Fa ny fanatitra hohanina rehetra, izay voaharo diloilo, na ny maina, dia ho an’ny zanak’i Arona rehetra kosa, ka hiara-misalahy izy. 11 Ary izao no lalàna ny amin’ny fanati-pihavanana izay haterina ho an’i Jehovah: 12 Raha misy manatitra izany ho fanati-pisaorana, dia izao no hateriny ho fanampiny: mofo izay tsy misy masirasira sady voaharo diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voahoso-diloilo ary mofo atao amin’ny koba tsara toto voaendy sady voaharo diloilo. 13 Ary miaraka amin’ny mofo tsy misy masirasira dia mofo misy masirasira kosa no hateriny ho fanampin’ny fanati-pihavanana izay ataony ho fanati-pisaorana. 14 Ary hangalany iray avy ny isam-panatitra ho fanatitra asandratra ho an’ i Jehovah; ho an’ilay mpisorona manopy ny ran’ny fanati-pihavanana izany. 15 Ary ny henan’ny fanati-pihavanana izay ataony ho fanati-pisaorana dia hohanina amin’ny andro anaterana azy; tsy hisy havela ho tra-maraina. 16 Fa raha fanati-panalamboady na fanati-tsitrapo kosa no ateriny, dia amin’ny andro anaterany ny fanatiny no hihinanana azy, ary ampitson’iny no hihinanana izay ambiny. 17 Fa ny sisa amin’ny henan’ny fanatitra dia hodorana amin’ny afo amin’ny andro fahatelo. 18 Ary raha tahìny hihinanana amin’ny andro fahatelo ny henan’ny fanati-pihavanana, na dia kely aza, dia tsy horaisina na hisaina ho an’izay manatitra azy izany, fa fahavetavetana; ary ny olona izay mihinana amin’izany dia ho meloka. 19 Ary na ny hena izay mikasika zava-maloto aza dia tsy hohanina, fa hodorana amin’ny afo; ary ny amin’ ny hena, dia izay madio rehetra no mahazo mihinana azy; 20 fa ny olona izay misy fahalotoana, nefa mihinana hena avy amin’ny fanati-pihavanana, izay an’i Jehovah, dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny. 21 Ary ny olona izay mikasika zava-maloto, na fahalotoan’olona, na biby maloto, na izay zava-betaveta maloto, ka mihinana amin’ny henan’ny fanati-pihavanana izay an’i Jehovah, dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny. 22 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 23 Mitenena amin’ny Zanak’Isiraely hoe: Aza mihinana sabora akory hianareo, na ny an’ny omby, na ny an’ny ondry, na ny an’ny osy. 24 Ary ny saboran’ny biby izay maty ho azy sy ny saboran’izay noviraviraim-biby dia azo atao amin’ny zavatra hafa ihany, fa aza mihinana azy hianareo. 25 Fa izay rehetra mihinana saboran’ny biby fiompy, izay fanao fanatitra, atao amin’ny afo ho an’i Jehovah, dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny. 26 Ary aza mihinana ra eny amin’izay rehetra itoeranareo, na ny an’ny vorona, na ny an’ny biby fiompy. 27 Izay rehetra mihinana rà dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny."
Anankiroa amin’ireo karazana fanatitra fanaon’ny Zanak’Isiraely fahizany no hitantsika eto. Misy antony avokoa ny nanaovany ireny fanatitra ireny; ary raha naverimberina izy ireny tamin’ny fotoan’androny, dia nataon’i Jesosy indray mandeha monja tamin’ny nandatsahany ny rany teo ambony hazo fijaliana (Hebreo 9:11-12). Fanati-panonerana (1-10). Fanavotana tsy maintsy atao noho ny ota tsy nahy mitaky fanonerana; fidiovana ho afaka amin’ny fahalotoana ka ondrilahy na zanak’ondry no atao fanatitra (Lev.5:14-26). Tandindon’i Jesosy Kristy, Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jaona 1:29); izany rahateo koa ny anarany hoe Jesosy satria Izy no hamonjy ny olona ho afaka amin’ny fahotana (Matio 1:21b).
Fahamarinana: “...Mpanalalana amin’izay fanekena vaovao Izy (Jesosy), rehefa niharitra fahafatesana ho fanavotana amin’ny fahotana..., mba hahazoan’izay voantso ny teny fikasana, dia ny lova mandrakizay.” (Hebreo 9:15) Fanati-pihavanana (11-27). Fanompoam-pivavahana an-tsitrapo ho fisaorana sy firaisam-po amin’ny Tompo; misy sakafo iombonana tamin’izany ka izay tsy misy kilema avy amin’ny omby na ondry aman’osy ary mofo isan-karazany: mofo tsy misy masirasira, mofo manify, sns... no hatao fanatitra (Levitikosy 3). Zavatra madio no hohanina (19-20, 22-27) ary olona madio no mihinana (21). Tandindon’ny firaisana latabatra amin’i Jesosy Kristy amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo izay mitaky fahamasinana sy toetra mendrika izany.
Fahamarinana: “Koa na zovy na zovy no mihinana ny mofo sy misotro amin’ny kapoaky ny Tompo amin’ny fanahy tsy mendrika, dia ho meloka ny amin’ny tena sy ny ran’ny Tompo izy ...” (I Kor. 7:27-30).